Shristi Shrestha - Miss Nepal 2012 in Miss World
Topic: Shristi Shrestha - Miss Nepal 2012 in Miss World
Author Topic: Shristi Shrestha - Miss Nepal 2012 in Miss World (Read 57539 times)
Re: Shristi Shrestha - Miss Nepal 2012 in Miss World
« Reply #30 on: June 17, 2016, 11:27:32 PM »
सृष्टिका ‘गाजलु’ आँखा
समुन्द्र राज घिमिरे काठमाडौं, असार ३
मिस नेपालको ताजदेखि गाजलुसम्मको यात्रा
‘गाजलु’ फिल्मको ट्रेलर रिलिजपछि एक पूर्वकुमारीले सृष्टिलाई भनिछन्, ‘ट्रेलर हेर्दा मलाई आफू कुमारी हुँदाको समय याद आयो। धन्यवाद। म यो फिल्म अवश्य हेर्नेछु।’
यो फिल्म देशभरका हलमा प्रदर्शन भइरहेको छ। पूर्व मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठले अभिनेत्रीका रूपमा गरेको पहिलो कामको धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन्। सृष्टिको मन भने अझै धरमरै छ। उनी आफ्नो कामलाई लिएर दुई जनाको प्रतिक्रिया सुन्न आतुर छिन्।
एक जना उही पूर्वकुमारी, र अर्का रंगकर्मी सुनील पोखरेल ।
उनी सुनीलको प्रतिक्रिया सुन्न किन व्यग्र छिन् भने अभिनयमा उनलाई गुरु मान्छिन्। र, पूर्वकुमारीको प्रतिक्रिया सुन्न यस कारण आतुर छिन्, उनले गाजलु फिल्मका लागि चाहिने पूर्वकुमारीको तत्व उनैबाट सिकेकी हुन्। उनीसँगको निकटता र अध्ययनबाटै कुमारीको जीवन उतार्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछिन्।
‘यो फिल्म पूर्वकुमारीको कथामा बनेकाले मलाई कुमारी हुनुअघि र पछिको अवस्था जान्न आवश्यक थियो,’ आफूले चरित्र अध्ययन गरेकी पूर्वकुमारीको नाम नखुलाउँदै उनले भनिन्, ‘त्यसलाई कतिसम्म न्याय गर्न सकेँ भन्ने थाहा पाउन पनि उहाँको प्रतिक्रिया कुरिरहेकी छु।’
‘उहाँहरूले ओके नभनेसम्म मेरो क्यारेक्टर पूरा भएजस्तो लाग्दैन। तर, दुवैले फिल्म हेर्नुभएको रहेनछ, त्यसैले मेरो मनमा धुकचुक बाँकी नै छ,’ उनले भनिन्।
गाजलु रिलिज भएपछिको एक साँझ सृष्टिले मिस नेपालदेखि फिल्म यात्रासम्मको अनुभव सेतोपाटीसँग बाँडेकी थिइन्।
‘इमान्दार भएर भन्दा गाजलुमा मेरो कामबाट म आफैं सन्तुष्ट छैन,’ उनले भनिन्, ‘ह्यामलेटमा अभिनय गरिसकेपछि फिल्म खेल्न पाएको भए अझै राम्रो गर्थें हुँला।
गाजलु सृष्टिको अभिनय यात्राको पहिलो खुट्किलो हो, तर उनलाई अभिनयको नसा चढ्यो ह्याम्लेटबाट।
उनले अभिनय गरेको पहिलो नाटक ‘ह्यामलेट’ बेलायतमा मञ्चन भएको थियो। त्यतिबेला थिएटरमा उनको जुनखाले सपना थियो, ह्यामलेटले त्योभन्दा ठूलो अवसर दिएको उनले बताइन्। सायद त्यही भएर, ह्यामलेटमा अभिनय गर्न पाउनुलाई सृष्टि आफ्नो भाग्य ठान्छिन्।
‘गाजलुसम्म आइपुग्नलाई मिस नेपाल टाइटल नै कारण रह्यो होला, तर नाटकका लागि ‘इमेज’ महत्वपूर्ण रहेन,’ उनी भन्छिन्, ‘ह्यामलेटमा अभिनय गरेपछि मलाई रंगमञ्चको माहोल नै प्रिय लाग्न थालेको छ। रंगमञ्च ‘स्पिरिचुअल जर्नी’ जस्तो लाग्छ। पैसा नै नभए पनि एक्टरमा अभिनयप्रति एकदमै प्यासन हुन्छ।’
‘प्यासन’को मात्र कुरा होइन, उनलाई रंगकर्मीहरूसँग समय बिताउँदा आफ्नै परिवारसँग बसेजस्तो लाग्दो रहेछ। त्यसैले वर्षमा एउटा मात्र भए पनि नाटक खेल्ने सोचमा छिन्। भन्छिन्, ‘मलाई हिरोइन भनेर चिनिनु छैन। थिएटरले एउटा कलाकारलाई निखार्न सघाउँछ। अहिले फिल्मको कथालाई म जुन तरिकाले बुझ्छु, त्यो थिएटरले सिकाएको हो। थिएटर आफैंलाई चिन्ने माध्यम हो। आफ्नो कमजोरी र बलियो पक्ष चिन्न पनि थिएटरले नै सघाएको छ।’
सृष्टिलाई अलि कलात्मक फिल्ममा पनि अभिनय गर्न मन छ। ‘कमर्सियल नै भए पनि गाजलुजस्तो सशक्त भूमिका पाए गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ‘कालो पोथी’ जस्ता फिल्म बनिरहेका छन्। यो भनेको नेपाली फिल्ममा पहिचानको खोजी भइरहेको छ भन्ने हो। मलाई पनि यस्ता फिल्ममा काम गर्न मन छ।’
हुन त उनलाई मिस नेपाल ताज जितेदेखि नै फिल्मको प्रस्ताव आउन थालेको हो, तर त्यतिबेला आफूलाई गर्न सक्छु भन्ने विश्वास नभएरै फिल्म नखेलेको उनी बताउँछिन्। सुनील पोखरेलसँग अभिनय सिकेपछि भने उनलाई गाजलुको प्रस्ताव स्वीकार्ने आँट आयो।
र, आज मिस नेपालको ताज, एउटा फिल्म र एउटा नाटक गरिसकेपछि उनी भन्छिन्, ‘मिस नेपालबाट सुरु भएको यो यात्रा क्रममा नाटकसम्म आइपुगेपछि मलाई आफू अलि बढी अनुभवी र गम्भीर भएको महसुस हुन थालेको छ। एउटा कलाकारका लागि नाटकले धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ।’
सुखद सपना प्राप्तिले सधैं सुखद अनुभूति दिन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ निद्रामा पर्ने ऐंठनजस्तो बनिदिन पनि सक्छ!
सृष्टिको हकमा पनि यस्तै भएको थियो।
सन् २०१२ को मिस नेपाल विजेता हुँदा सुरुमा त खुसी नहुने कुरै थिएन। वर्षौंदेखिको सपना जो पूरा भएको थियो। त्यसपछि भने केही महिनासम्मै उनी झन्डैझन्डै विचलितजस्तै भइन्–शिरमा ‘मिस नेपाल’ ताज जति टल्किएको थियो, त्योभन्दा बढी निस्सासले मस्तिष्क भारी भएको उनलाई अनुभूति भयो।
त्यसको आफ्नै कारण छ।
कसैले ‘सिटी गर्ल’ (सहरीया केटी) भन्दा सृष्टिको चित्त बुझ्दैन। नारायणगढमा जन्मिएकी उनको बाल्यकाल दाङ र गोरखाको गाउँमा बित्यो। १२ वर्ष उमेरमै उनी बेलायत पुगिन्, तर त्यहाँ उनी जहाँ बस्थिन् त्यो गाउँजस्तै थियो। ‘सिटी गर्ल’ भन्दा उनको दिमागले प्रकृतिसँग टाढाको ठाउँ भन्ने अर्थ लगाउँछ। दाङ, गोरखादेखि बेलायतसम्म उनलाई प्रकृतिसँग नजिक नै लागे। कलेज पढ्दा र अहिले बस्दै आएको काठमाडौं मात्र उनले भन्ने गरेको सहर हो।
मिस नेपाल भएपछिका केही महिना अत्यधिक छटपटी हुनुको कारण यही हो, सृष्टिका भनाइमा।
‘मिस नेपाल भएपछि मानिसको आस अर्कै हुन्छ,’ सृष्टिले सम्झिइन्, ‘म त्योखाले सहरीय मनोविज्ञानमा हुर्किएकी थिइनँ। मिस नेपालको इमेज र मानिसले राख्ने आसका कारण आफैंभित्र द्वन्द्व पैदा हुन्थ्यो। धेरैपटक मैले आफ्नो परिचय खोज्थेँ। त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिसको बेला थियो।’
सृष्टिलाई बुबाआमाबाट टाढा हुनुपर्दाको एक्लोपनले मात्र सताउँथेन, आफैंभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र बिग्रँदै गएको स्वास्थ्यका कारण पनि उनी झनझन् चिन्तित हुन्थिन्। एक्लै बस्ने भएकाले नियमित र सन्तुलित खाना नहुँदा उनको स्वास्थ्य बिग्रिएको थियो। साथीहरू ‘ममीले खाना कुरिरहनुभएको छ, घर छिटो जानुछ’ भन्दा उनको मन कुँडिन्थ्यो।
उनी हरेक दिन बाआमासँग फोनमा कुरा गर्थिन् र रुन्थिन्। सृष्टि बुझ्ने भइसकेपछि सबैभन्दा धेरै रोएको कालखण्ड त्यही थियो।
पछि मिस वर्ल्डको ट्रेनिङ बेलायतमै भयो। एयरपोर्टमा सृष्टिका बाआमा र भाइ लिन आइपुगेका थिए। सृष्टि रोइहालिन्। त्यसपछि सबैसँग कसिलो अंकमाल गरिन्। सबैभन्दा ठूलो सपना पूरा भएपछि बाआमासँगको पहिलो भेट त्यही थियो, जुन चित्र सृष्टिको दिमागमा अझै ताजा बसेका छन्।
मिस वर्ल्डको उत्कृष्ट २० भित्र परेपछि सृष्टिको तारिफ चुलियो। विस्तारै उनी रंगीन दुनियाँमा रमाउन थालिन्। मिस नेपाल भएपछिको सकस विस्तारै हट्दै गयो।
बेलायत बस्दा सृष्टिका बुबा अक्सर भन्ने गर्थे, ‘आफू जुन ठाउँबाट आएको हो, त्यो ठाउँलाई भुल्नु हुँदैन। केही गर्नुपर्छ। समाजसेवा गर्न धनी हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यस्तो मान्छे बन्नुपर्छ, जसले सानो काम गर्दा पनि ठूलो प्रभाव परोस्।’
सृष्टिको परिवार दाङमा बस्दा गाउँका थुप्रै मानिस लामखुट्टेको टोकाइबाट बिरामी परेका थिए। उनका बुबाले रातारात लखनऊ पुगेर लामखुट्टे मार्ने औषधी ल्याएर गाउँभरि छर्किएका थिए। समाजसेवामा बुबाको लगाव देखेर सृष्टि पनि सानै उमेरमा प्रभावित भएकी थिइन्। झन् बुबाले बेलाबेला समाजसेवाप्रति उत्प्रेरित गर्दा सृष्टिको मनमा आफू केही बनेर समाजसेवा गर्ने धोको जागेको थियो।
केही बन्न अरूको भर पर्न नहुने सृष्टिले कलिलै उमेरमै जानिन्। बेलायत पुगेको दुई वर्षमै उनले रेस्टुरेन्टमा वेट्रेसको काम गर्न थालिन्। त्यतिबेला उनको उमेर जम्मा १४ वर्ष थियो।
यो रेस्टुरेन्ट यस्तो ठाउँ बन्यो, जसले उनको मनमा ‘मोडलिङ चस्का’ लगाइदियो।
एकपटक उनको रेस्टुरेन्टमा एउटा समूह आइपुग्यो, उनी अर्डर लिन गइन्। समूहबाट कसैले सोध्यो, ‘तिमी मोडल हुन चाहन्छौ?’ सृष्टि सुरुमा त अकमकिइन् र भनिन्, ‘परिवारलाई सोधेर खबर गर्छु।’ परिवारले अनुमति दियो पनि।
सूर्योदयमा फोटो खिच्नुपर्ने भएकाले भोलिपल्ट बिहानै ४ बजे नै उठिन्। उनी बस्दै आएको ठाउँनजिकै समुद्री किनारमा फोटोसुट भयो। उनलाई पहिलो फोटोसुटको सम्झना छ, ‘म साह्रै नर्भस भएको थिएँ। टोलीका सदस्यहरू मलाई हँसाउथे। त्यही बेला फोटो खिचिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ हातखुट्टा चलाउँदै हामीले खोजेको यस्तै हो भन्थे। अनि म त्यस्तै गर्थें। पछि त्यो फोटो एउटा म्यागेजिनमा छापियो।’
त्यसपछि लामो समय मोडलिङमा आउने मौका मिलेन। कलामा भने उनको रुचि थियो। स्कुल पढ्दै गर्दा पनि ‘पफर्मिङ आर्ट’ विषय छनोट गरेकी थिइन्। जसमा संगीत र नाटक पढाइन्थ्यो। कलेजमा पनि पफर्मिङ आर्ट नै रोजिन्। त्यसो त उनको मुख्य विषय भने नर्सिङ भयो। उनले नर्सिङमा स्नातक गरेकी छन्।
पफर्मिङ आर्ट पढ्दा उनको विशेष रुचि रंगमञ्चमा थियो। मोडलिङमा उनले कहिल्यै करिअर बनाउने सपना सोचेकी थिइनन्। सानैदेखि नाटक हेर्ने बानी बसेकाले उनको रुचि नाटकतिर बढी थियो।
‘एउटा एक्टरले आफ्नो कल्पनालाई त्यत्रा दर्शकको आँखैअगाडि विश्वास लाग्ने गरी देखाउँदा थिएटरले मलाई प्रभाव पार्यो,’ सृष्टि भन्छिन्, ‘थिएटरमा कलाकार र दर्शकबीच छुट्टै आत्मियता हुन्छ। त्यसले तान्यो।’
लन्डन बसेर बिएस्सी नर्सिङ गरिरहँदा उनले एउटा ‘इन–हाउस म्यागेजिन’ मा पनि काम पाइन्। यही सम्पर्कबाट उनलाई लन्डनमै फेसन शोमा मोडलिङ गर्ने मौका मिल्यो। यसबीच उनले मिस नेपालको चर्चाबारे पनि सुनिरहेकै हुन्थिन्। उनी इन्टरनेटमा मिस नेपालबारे खोजिरहन्थिन्। सन् २०१० मा छुट्टीमा नेपाल आएका बेला उनी मिस नेपालको ट्रेनिङ भएको ठाउँ पुगिन् र त्यहाँका गतिविधि नियालिन्। पछि फाइनल पनि हेरिन्। उनलाई भित्रैदेखि आफूले पनि जित्न सक्छु कि भन्ने आत्मविश्वास जाग्यो।
र, सन् २०१२ मा मिस नेपालमा विजेता बनेरै छाडिन्।
मिस नेपालप्रति मोह जाग्नुको कारणबारे सृष्टि भन्छिन्, ‘नेपालजस्तो महिलालाई घरबाहिर पठाउन पनि गाह्रो मान्ने समाजमा मिस नेपाल भएपछि मिस वर्ल्डमा जाँदा चुनौती बढ्छ, आफूलाई बलियो बनाउने अवसर पनि यही हो। मलाई मिस नेपाल एउटा महिला आफैंमा बलियो बन्न सक्ने प्लेटफर्मजस्तो लाग्यो ।’
पहिले मोडलिङमा रुचि नभए पनि अहिले चल्तीकी मोडल बनिसकेकी छन् सृष्टि। बलिउड गीत ‘कभी जो बादल बर्से’ को अनप्लग्ड भर्सनमा समेत उनको अभिनय छ।
बलिउडमा संघर्ष गर्न गएको बेला यो मौका पाउनुभएको हो?
‘मलाई यही भनेको मन पर्दैन क्या,’ सृष्टि हाँस्दै भन्छिन्, ‘यो एउटा ‘मोडल जब’ थियो, ‘एक्टर जब’ होइन।’
मिस वर्ल्डमा पुग्दा एउटा मोडलिङ एजेन्सीले उनको पफर्मेन्स देखेर उनलाई यो अवसर दिएको रहेछ। एजेन्सीका माध्यमबाट उनले थुप्रै फेसन विकमा फेशन शो पनि गरेकी छन्।
नारायणगढको जन्म, गोरखा, दाङ, बेलायत, मिस नेपाल, नायिका। यी सबैलाई नियाल्दा सृष्टिले निकालेको निश्कर्ष हो, ‘आफूलाई विश्वास भए मात्र सपना पूरा गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि थुप्रै अप्ठ्यारासँग सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्।
उनी अहिले दाङकी सृष्टि र मिस नेपाल सृष्टिबीच आफ्नै तुलना गर्छिन्। थप्छिन्, ‘आशावादी रहिरहनु ठूलो कुरा रहेछ। मेहनतले मात्रै पुग्दैन, त्यो पाउन अरु स–साना इच्छाबाट आफूलाई अलग्याउन कठोर सम्झौता गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ ३, २०७३ १८:३३:३७
« Reply #31 on: September 23, 2016, 03:21:25 AM »
She is really pretty 😁
« Reply #32 on: September 27, 2016, 01:48:07 PM »
« Reply #33 on: September 27, 2016, 02:29:14 PM »
Lol... S for Shristi pani huncha ni
« Reply #34 on: September 27, 2016, 09:28:50 PM »
Quote from: Thu108a8u on September 27, 2016, 02:29:14 PM
Shristi nai ho
« Reply #35 on: January 19, 2017, 02:47:33 PM »
damn, she is pretty.
« Reply #36 on: January 19, 2017, 02:48:07 PM »